Uyibhala njani inoveli: isitayile | Uncwadi lwangoku
Njengoko besitshilo eposini esiqale ngayo monograph yangoku, uninzi lweencwadana malunga nokudalwa okubalwayo kushwankathela okona kuxhalabisayo kwisitayile kwisilinganiselo: ukuba ungayitsho ngegama elinye, awudingi ukusebenzisa mabini.
Lo nto, Ukucaca kwaye ngaphezulu kwayo yonke indalo kuya kuba ziintsika ezisisiseko apho isiseko sesinyibilikisi sisekwe, yiyo loo nto bonke ababhali bathi banayo.
Xa sithetha ngesimbo, ubukhulu becala sibhekisa kwisitayile sombalisi, eyahlulwe kwisitayile sabalinganiswa, nganye kuzo inelizwi layo elisekwe kwiimpawu zayo njengoko besicacisile kwizithuba ezidlulileyo. Aba bathambekele ekuzibonakaliseni ngendlela yendalo kunye nokuzenzekelayo kunombalisi, kodwa isitayile sabo asiyikopi yekhabhoni yolwimi lokwenyani kodwa endaweni yokuzihlaziya kwakhona.
Elinye icebo elihlala linikezelwa kwiincwadana kuku zama ukungaguquguquki kwaye uyinyani kwisitayile kuwo wonke umsebenzi. Akukho mntu ukhulelwa umbalisi, othi ngaphandle kwesizathu athethe rhetorical ekuqaleni komsebenzi, ebonisa isichazi-magama esikhulileyo kwaye asiphele ngesimbo esicacileyo kwaye ahlupheke ngamagama. Umanyano lwesitayile lubonakaliswe njengoyena ndoqo womsebenzi onokuthenjwa.
Emva koko siza kubhenca ezinye iindlela zokuphepha kunye nezinye izixhobo eziluncedo ukuyifumana:
Gwema ukuphindaphinda kunye nokuzaliswa. Kuyanceda ukuba nesichazi-magama sezithetha-ntonye kunye nezichasi esandleni.
Kulumkele ukugqithisa kwesitayile: ayinangqumbo, okanye incoko egqithisileyo. Ukufunda ngokuvakalayo kunokusinceda kulo msebenzi.
Kuphephe ukuthotyelwa ngokugqithiseleyo kunye nezivakalisi ezide kakhulu. Ukulawula is syntax kunokuba luncedo xa uphinda ubeke enye isicatshulwa.
Ethintela ukungachaneki okubekiweyo. Ngenxa yoku, kubalulekile ukuba ujonge kwisichazi-magama seenkcazo nanini na sikholelwa ukuba kufanelekile.
Ziphephe iimpazamo zegrama. Ukuba negrama efanelekileyo ngesandla kunokuba yinto exabisekileyo.
Okokugqibela, kufuneka zama ukufumana isingqisho seprozi ngokuchanekileyo Kwaye oku, njengakwisihobe, kufuneka sithathele ingqalelo, nangona kungaphantsi, inani lamalungu kunye nokuma kwezivakalisi. Ukutshintsha ukuma kwelizwi, ukukhangela isithethantonye kunye neesilabhili ezininzi okanye ezimbalwa okanye ukukhetha phakathi kwezinto ezimbini onokukhetha kuzo kuxhomekeke koxinzelelo kunokwenza umahluko wesicatshulwa sethu ngokubhekisele kwiindlebe zabafundi. Le yokugqibela ingongoma yendalo ngokwenyani apho ukuziqhelanisa kwaye ngakumbi isifundo esibalulekileyo sesitayile seminye imisebenzi zezona zinokusinceda kakhulu ukuba siqhubele phambili. Kwakhona, ukufunda iindinyana zethu ngokuvakalayo kunokuba luncedo olukhulu koku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Uyibhala njani inoveli: ukukhangela isitayile